(SAWIRRO) Siyaasi Cabdi faarax Juxa oo ku dhawaaqay inuu u taagan yahay xilka madaxtinimada Puntland. | puntlandi.com
Friday, August 10th, 2018 | Posted by P2
(SAWIRRO) Siyaasi Cabdi faarax Juxa oo ku dhawaaqay inuu u taagan yahay xilka madaxtinimada Puntland.
Garowe (Puntlandi) Wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda Puntland iyo sidoo kale soo noqday wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda federalka Soomaaliya, Cabdi Faarax Siciid Juxa ayaa xalay ku dhawaaqay olalahihii doorashada Puntland islamarkaana caddeeyay inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynaha dowladda Puntland ee 2019.
Murashax Juxa ayaa olalahaan kaga dhawaaqay xaflad si heer sare ah loosoo qaban qaabiyay oo ka dhacday hotel Grand ee magaalada Garowe, taasoo ay ka qeyb galeen marti sharaf gaaraysay boqolaal ruux oo ay ku jireen murashixiin u taagan xilka madaxtinimada Puntland.
Murashax Abdi Farah Siciid ayaa doonitaankiisa kursiga ugu sareeya Puntland saldhig uga dhigay laba arimood oo kala ah Aragti iyo Feker uu ku wajihi karo caqabada Puntland maanta horyaala, oo uu tilmaamay haddii fursad loo siiyo inuu wajihi karo, midda labaadna wuxuu ku sheegay inuu saldhig u yahay hormuud iyo dhaq-dhaqaaq jiil cusub ay tooshka isku dhiibayaan, kaasoo ay aragti dheer hoggaaminayso.
Jubaxa waxa uu sheegay inuu xoogga saari doono Amniga oo qofkasta oo Puntlander ah uu nabad ku seexan doono kuna soo toosayo. Waxa uu caddeeyay inuu kobcin doono dhaqaalaha Puntland, gacan ammaan ah uu galin doono, sidii loogu talagalayna uu u maamulayo, haddii xilkan uu ku guulaysto. Saldhiga barnaamijkiisa ayuu ku tilmaamay ” Wadajir Bulsho” waxa uu caddeeyay inuu doonayo inuu horseed ka noqdo Puntland oo Heshiis ah oo isku calool fayow, taasoo bahda dhaqanku ugu horeeyaan. Adeegga Bulshada ayuu sheegay inuu xoogga saarayo si dhammaystirsan, dhinacyada Caafimadka, Waxbarashada, iyo Biyaha wixii lamid ah.
Arrimaha Faderaalka ayuu dhaliil ujeediyay ujeediyay, isagoo sheegay inuu jiro Dheeli, waxaana uu sheegay inuu siyaasad cad ka yeelan doono iyo guud ahaan arimaha Faderaalisim-ka iyo tan gobolka oo idil. Waxaa kaloo intaas dheer inuu dowladda federalka uga digay inay faro galin ku sameyso doorashada Puntland.
Ugu danbayn dadka ayuu waydiiyay su’aal ah maxaad igu rumaysnaysaan? taasoo uu uga jawaabay ” Anigu waxaan idin leeyahay raadkayga dib u raaca, laba jeer ayn idin matalay marna waxbarasho ayaan idinku matalay marna siyaasad ayaan idinku matalay, taasoo la macno ah labada jeer waan ka soo dhalaalay xilka aan u hayay shacabkayga.
Murashixiintii kala qeyb galay xaflada oo ay kamid ahaayeen Cali Xaaji Warsame, Khaliif Ciise iyo Jamiila Saciid Muuse, ayaa ku ammaanay Mr. Juxa inuu yahay siyaasi aragti fog leh, una qalma inuu shacabka Puntland hogaamiyo.
Xaflada waxaa sidoo kale ka hadlay dadkii usoo joogay waxqabadkiisii uu ka geystay xagga waxbarashada Puntland, kuwaas oo ku ammaanay Juxa inuu ahaa nin ku suntanaa xagga cadaalad usameynta dadka reer Puntland islamarkaana mirihii uu soo saaray ay maanta ka muuqdaan wasaaradda waxbarashada Puntland.
Juxa ayaa noqonaya murashixii ugu horeeyay ee Puntland gudaheeda uga dhawaaqa musharaxnimadiisa.